अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खाता र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिंग
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिंग जानकारी
एक अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खाता एक देश खातामा एक बैंक खाता हो जुनमा तपाईं नागरिक हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिंग, वा एक अपतटीय बैंक खाता, सामान्यतया क्यारेबियन टापुहरू, साइप्रस, लक्जमबर्ग वा स्विजरल्याण्ड जस्ता वित्तीय आश्रयमा खोलिएका खाताहरूलाई जनाउँछ। अवधि अफशोर ग्रेट ब्रिटेनमा उत्पन्न भयो र मूल रूपमा त्यहाँ स्थित नभएका बैंकहरूलाई जनाउँदछ। मेरिअम-वेबस्टरको शब्दकोशका अनुसार अफशोरको अर्थ "परदेशमा अवस्थित वा अपरेटिंग" हो।
सम्भवतः वैश्विक पूंजीको percent० प्रतिशत अपतटीय बैंकहरूमा बग्दछ। यी बैंकिंग क्षेत्रले पर्याप्त गोपनीयता, कडा सुरक्षात्मक कानून र तपाईंको निक्षेपहरूको विश्वव्यापी उपलब्धता प्रदान गर्दछ। एक अपतटीय ट्रस्ट वा कम्पनी संग जोडिएको छ जब व्यक्तिहरु प्राय: मुद्दा, देखि सम्पत्ति संरक्षण को लागी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिंग को उपयोग।
अफशोर बैंक खाता खुल्दै
एक अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खाता खोल्ने यो तपाइँको घरेलु खाता खोल्ने भन्दा फरक छैन। तपाइँलाई केहि थप कागजातहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ। तपाइँ तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी र पहिचान, एक संदर्भ वा दुई र तपाइँको खोल्ने निक्षेप प्रदान गर्नुहोस्। विदेशमा बैंक खाता खोल्दा, बैंकहरूलाई सामान्यतया तपाईंको राहदानीको एक नोटरी प्रतिलिपि चाहिन्छ। थप रूपमा, तपाईंलाई निवासको प्रमाण चाहिन्छ, जस्तै उपयोगिता बिल, केहि अन्य आईटमहरूमा। आइटम तपाईंले प्रदान गर्न आवश्यक संस्थाको आवश्यकता र स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूमा निर्भर गर्दछ।
एक अपतटीय बैंकले तपाइँको वर्तमान बैंकबाट सन्दर्भ कागजातहरू अनुरोध गर्न सक्छ। यदि तपाईंसँग पहिले नै अर्को बैंकमा बैंक खाता छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकले तपाईंलाई कम जोखिमको रूपमा देख्दछ। यो आवश्यकता सामान्यतया तपाईंले हाल प्रयोग गर्नुहुने बैंकबाट एक सन्दर्भ पत्र उत्पादन गरेर सन्तुष्ट हुन्छ।
केहि परिस्थितिहरूमा, अपतटीय बैंकले खातामा जाने कोषहरूको स्रोत प्रमाणीकरण गर्न सक्दछ। तिनीहरूले लेनदेनको प्रकारलाई हेर्छ जुन तपाईंले रोजगार अपेक्षा गर्नुहुन्छ। यो बैंकको सुरक्षाको लागि हो। कारण यो हो कि अफशोर बैंकहरू उनीहरूले अवैध गतिविधिहरूमा संलग्न नरहेको सुनिश्चित गर्न पर्याप्त दबाबमा थिए। अन्यथा, तिनीहरू जरिवाना लिन वा उनीहरूको बैंकिंग इजाजतपत्र गुमाउने जोखिममा छन्।
कोष को स्रोत को प्रमाण
यदि तपाइँ कार्यरत हुनुहुन्छ भने, एक भुक्तानी stub कोष प्रमाणीकरण को लागी सन्तोषजनक साबित हुनुपर्छ। घर जग्गा सम्पत्ति वा व्यापार लेनदेन को पैसा को लागी करार को माध्यम बाट मूल प्रमाण को आवश्यकता हुन सक्छ, कागजात बन्द र जस्तै। बीमा सम्झौताबाट रकम जम्मा गर्दा बीमा कम्पनीको पत्र पर्याप्त हुन्छ। यदि रकम पैतृक रूपमा प्राप्त भयो भने, एस्टेटको कार्यकारी वा व्यक्तिगत प्रशासकले बैंकमा पत्र पठाउन सक्दछ। अपतटीय बैंकले तपाइँको लगानी आय कहाँ र तपाइँको लगानी कहाँ आयोजित को बारे मा सोधपुछ गर्न सक्छ।
अफशोर कम्पनीले तपाइँको खाता स्थापना गरेको फाइदा यो हो कि हामी योग्य परिचयकर्ता हौं। यसैले हामी तपाईको खाता धेरै न्यायालयहरुमा तपाईको खाता स्थापित गर्न सक्दछौं जुन तपाईलाई विदेश यात्राको आवश्यकता बिना नै हो।
अफशोर बैंकिंग सल्लाह र लाभहरू
जब तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय बैंक गर्नुहुन्छ तपाईं विदेशी क्षेत्राधिकारका विभिन्न फाइदाहरूको फाइदा लिइरहनुभएको छ। केही देशहरूमा अपतटीय बैंकिंग गोपनीयता यत्तिको गम्भीरताका साथ लिइएको छ, अनधिकृत पार्टीहरूलाई जानकारी प्रदान गर्नु बैंक कर्मचारीहरूका लागि अपराध हो। एक अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खाता एक महान गोपनीयता उपकरण हुन सक्छ। तपाईंको वित्तीय गोपनीयता अधिकतम बनाउनको लागि, तपाईं एक अपतटीय कम्पनीको नाममा बैंक खाता खोल्नुहुन्छ।
तपाईंले भोग्ने कर लाभहरू तपाईंको देशमा निर्भर गर्दछ। अमेरिकी मानिसहरु, उदाहरणका लागि, हो कर लगाईयो विश्वव्यापी आय मा। बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियाले यसका बासिन्दाहरूलाई खाताको स्थानको पर्वा बिना कर लगाउँदछन्। त्यसैले यो कानून को पालना र कर र कानूनी सल्लाह प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
किनभने अपरेटिंग लागतहरू सामान्यतया कम हुन्छन् किनकी अफशोर बैंकहरू प्रायः घरेलु बैंकहरूको तुलनामा उच्च ब्याज दर दिन्छन्। अफशोर बैंकहरूले सुरक्षा प्रस्ताव गर्न सक्दछ यदि तपाईं एक अस्थिर मुद्रा वा राजनीतिक वातावरणको साथ एक देशमा बस्नुहुन्छ। यदि यो तपाईं हो भने, तपाईंको पूँजी अपतटीय जम्मा गर्नु तपाईंको लगानीलाई सुरक्षित राख्नको लागि उत्तम तरिका हो। के स्थानीय न्यायाधीशले तपाईंको बैंक खाता फ्रिज गर्ने बारे चिन्ता गर्नुहुन्छ? यो गर्न को लागी धेरै गाह्रो हुन्छ जब तपाईको पैसा अफशोर बैंकमा राखिएको हुन्छ।
धेरै मानिसहरु का विदेशहरु मा साथीहरु र आफन्तहरु छन्। अफशोर खाताहरू पैसा राख्नको लागि पनि राम्रो ठाउँहरू हुन् यदि तपाईं तिनीहरूलाई धन पठाउन चाहनुहुन्छ भने। सायद अर्कै देशमा बस्ने प्रिय व्यक्तिले तपाईंलाई पैतृक सम्पत्ति छोडेर गयो। यदि त्यसो हो भने, त्यस देशमा खाता खोल्नु भनेको तपाईंको पैसामा पहुँच गर्न सजिलो तरीका हो। के तपाइँ कुनै ठूलो गन्तव्यहरू विदेशमा निश्चित गन्तव्यहरूमा यात्रा गर्नुहुन्छ? तपाइँ यात्रामा तपाइँसँग ठूलो मात्रामा पैसा बोक्नुबाट बच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै, तपाईं सट्टामा एक विदेशी बैंक खाता को लागी अप्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
किन अपतटीय खाता खोल्ने?
अफशोर कम्पनीहरू र / वा ट्रस्टहरू द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खाताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षणमा सबैभन्दा धेरै प्रस्ताव गर्दछ। जब तपाइँको स्थानीय अदालतले "पैसा हस्तान्तरण" गर्छन, अफशोर ट्रस्टे पालन गर्न अस्वीकार गर्न सक्दछ। त्यसकारण एक अफशोर सम्पत्ति सुरक्षा ट्रस्टको साथ अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खाता सबैभन्दा शक्तिशाली संयोजन हो।
बैंकिंग अफशोर पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अवसरहरूमा भाग लिने एक उत्तम तरिका हो। यस संस्थाले सबै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारहरूमा बैंक खाताहरू खोल्छ र एकको रूपमा कार्य गर्दछ योग्य परिचयकर्ता स्विजरल्याण्डको सब भन्दा बलियो बैंकहरूमा।
एक अपतटीय बैंक खाता स्थापना गर्न को लागी एक सब भन्दा बलियो तर्क विविधता छ। एक राम्रो गोलाकार पोर्टफोलियो अक्सर स्टक, बॉन्ड, घर जग्गा, बहुमूल्य धातुहरू र यस्तै प्रकारको हुन्छ। त्यो हो, सम्पत्ति विविधिकरणको बढ्दो अर्थ भनेको तपाईंको पैसालाई बिभिन्न सम्पत्ति वर्गहरूमा राख्नुको सट्टा हो। यसको मतलब भौगोलिक र भौगोलिक राजनीतिक विविधीकरण हो, जुन तपाईं एक अपतटीय बैंक खाताबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ध्यानमा राख्नुहोस् कि हालको अमेरिकी राष्ट्रिय debtण हर समय उच्च छ, यस लेखनमा $ २२ खरब डलर। ती संख्याको मतलब अमेरिका पनि कमजोर छ। बेलायत £ २.२ ट्रिलियन (tr illion ट्रिलियन) inण मा छ। फ्रान्स र जर्मनी €ण मा € 22 ट्रिलियन (tr ट्रिलियन) भन्दा बढी हो।
त्यसोभए, कोषहरूको अपतटीय हुनु भनेको आफैंलाई अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने एउटा तरिका हो। यदि तपाईंको देशको वित्त debtणको खरायो प्वालमा चुस्नुभयो भने, तपाईं तिनीहरूलाई तपाईं आफैं लैजान चाहनुहुन्न। त्यसोभए, यदि तपाईंसँग सुरक्षित क्षेत्रहरूमा कोष छ भने घरेलु हिसाबले आर्थिक पतन हुन्छ भने, तपाईं आफ्नो छिमेकीहरू भन्दा धेरै राम्रो आकारमा हुनुहुनेछ। सबै पछि, अमेरिका यसको अत्यधिक ofणको कारण स्ट्यान्डर्ड र गरीब द्वारा डाउनग्रेड गरिएको छ। विश्वमा केवल १ S S&P AAA मूल्या rated्कन गरिएका देशहरू छन्। अमेरिका तिनीहरू मध्ये एक होइन।
तपाइँको मुद्रा छनौट गर्दै
धेरै जसो अमेरिकी खाताहरू भन्दा फरक हुन्छ, एक अपतटीय बैंकले तपाईंलाई विभिन्न मुद्राहरू बीचमा छान्न अनुमति दिन्छ जसमा तपाईंको कोषहरू समात्छ। धेरै लगानीकर्ताहरू विभिन्न मुद्रामा सम्पत्ति राख्न रुचाउँछन्। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू कम प्रभावित हुन्छन् यदि डलरको खरीद शक्ति खस्कियो।
जहाँसम्म, त्यहाँ धेरै मुद्राको बीच छनौट गर्न धेरै फाइदाहरू छन्, त्यहाँ कमजोरीहरू पनि छन्। तपाईले कमाएको ब्याजमा विदेशी करहरू समाप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि देश जसको मुद्रामा तपाईंले मन्दीको अनुभवहरू लगानी गर्नुभयो, मुद्रा अवमूल्यन सम्भव छ। यसको मतलब तपाइँको बैंक खातामा सम्पत्तिहरूको मूल्य खस्किन सक्छ। त्यहाँ सधैं एक देश मा शासन परिवर्तनको सम्भावना, र पछि बैंकहरूको राष्ट्रियकरणको संभावना छ।
पछिल्ला धेरैजसो देशहरूमा यस्तो सम्भावना हुँदैन। दिमागमा राख्नुहोस् कि धेरै देशहरूमा अमेरिकाको साइबरसुरक्षा शक्ति छैन। त्यसोभए, पहिचान चोरी वा त्यस्तै साइबर-अपराधको अनुभव गर्ने कठिनाइहरू थोरै बढ्दछन्। थप रूपमा, धेरै देशहरूमा युएस जस्तो उपभोक्ता संरक्षण कानून छैन। विदेशी बैंक खाता खोल्नु अघि राष्ट्रको उपभोक्ता संरक्षण कानूनको अनुसन्धान गर्नुहोस्। अझ राम्रो, अपतटीय खाताहरू खोल्नेमा अनुभवको साथ एक संगठनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो संगठन अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खाताहरू चाहने मानिसहरूलाई मद्दत गर्न सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी हो।
अर्कोको लागि एक मुद्रा परिवर्तन गर्दा प्राय: विनिमय शुल्कहरू सामेल हुन सक्छन्। विनिमय शुल्क मुद्रा रूपान्तरण मा स्थिर घटक रहन्छ। यसैले अधिकांश व्यक्तिहरू जसले लगानी रणनीतिको रूपमा फोरक्स डे ट्रेडि practice अभ्यास गर्छन् सामान्यतया हराउँछन्।
व्यावसायिक मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्
त्यसोभए, माथिका कारणहरूले दृढताका साथ समर्थन गर्दछ किन किन अपतटीय बैंक खाता खोल्दा व्यावसायिक मद्दतको लागि यति महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा पेशेवरहरुलाई थाहा छ कि कुन बैंकले हाम्रा ग्राहकहरुसँग राम्रो व्यवहार गरेको छ। हामीलाई थाहा छ कि तपाइँको देशमा बस्ने मानिसहरूलाई कुन बैंकले खाताहरू खोल्ने छ। यसबाहेक, बैंक सुरक्षा हाम्रो ग्राहकहरु को लागी एक तीव्र इच्छा हो। त्यसोभए, हामी सिफारिश गर्नु अघि हामी नियमित रूपमा बैंकहरूको विवादास्पद अनुसन्धान गर्दछौं। यसको बाबजुद पनि, सबै बैंकहरू वित्तीय स्टॉलवर्डको रूपमा समाप्त हुँदैनन्। त्यस्तै रूपमा, त्यहाँ माथि तपाईसँग एक पेशेवरको साथ तपाईंको आवश्यकताहरू छलफल गर्न संख्याहरू छन्। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं यस पृष्ठमा निःशुल्क परामर्श फारम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं तपाईंको अफशोर बैंक खाता कोष गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको घरेलू बैंक खाताबाट तपाईंको अफशोर बैंकमा वायर ट्रान्सफर पठाएर। त्यहाँ एक अफशोर बैंक गर्न को लागी यी स्थानान्तरण को लागी एक सानो विचार छ, र त्यो शुल्क सम्बन्धित छ। घरेलु बैंकहरू बीच बनाइएको तार स्थानान्तरणहरूको विपरीत, अन्तर्राष्ट्रिय तार ट्रान्सफरमा कहिलेकाँही ग्राहकलाई शुल्क लिईन्छ रकम पठाइन्छ वा प्राप्त गरियो। त्यहाँ कुनै मानक शुल्क छैन, त्यसैले सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय बैंकि clients ग्राहकहरूले सबै भन्दा राम्रो सम्झौताको प्रस्ताव राख्ने संस्थाहरूको खोजी गर्नुपर्छ। विशेष रूपमा, अफशोर बैंकहरूले सामान्यतया चेक (चेकहरू) प्रयोग गर्दैनन्। त्यसो भए, उत्तम विकल्पहरू तार ट्रान्सफर हुन्।
तपाईंको अपतटीय खाताहरूबाट रकम फिर्ता लिने कार्य सामान्यतया सरल हुन्छ। यो किनभने तपाईंको बैंकले तपाईंलाई एटीएम वा डेबिट कार्ड प्रदान गर्नुपर्दछ। यस तरीकाले, तपाईंको पैसा विश्वव्यापी रूपमा सजीलो पहुँच योग्य छ। अब, यी लेनदेन पनि उचित शुल्कको अधीनमा छन्। विरलै, एक अफशोर बैंक चेक प्रदान गर्दछ, तर यो धेरै ग्राहकहरु को लागी रकम फिर्ता लिन उपयुक्त छैन। जब एक अफशोर बैंकले ग्राहकलाई जाँच गर्दछ, गोपनीयता घट्दछ। यो विदेशी बैंकमा बनेको चेकलाई घरेलु रूपमा नगद गर्न पनि गाह्रो छ। यसबाहेक, यस्तो चेकलाई नगद दिन लामो प्रतीक्षा अवधि आवश्यक पर्दछ।
एक राम्रो विकल्प क्रमशः घरेलू र अपतटीय बैंकमा दुई खाताहरू प्रयोग गर्दैछ। तार स्थानान्तरण मार्फत, तपाईं आफ्नो अफशोर खाताबाट तपाईंको घरेलू बैंकमा पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाइँको रकम प्राप्त गर्न मुद्दा होइन। तपाईं अझै पनि तपाईंको अफशोर बैंक खाता द्वारा प्रस्ताव गरिएको गोपनीयताको मजा लिनुहुन्छ जबकि घरेलू बैंकको सुविधाको फाइदा लिदै।
अफशोर बैंक खाताहरूमा तपाईंको शोध प्रदर्शन गर्दा, स्थानीय करहरूलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश अपतटीय बैंकहरूले विदेशी खाताहरूमा स्थानीय कर लगाउँदैनन्, जबकि अरूले गर्छन्। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं स्विट्जरल्याण्ड मा एक अमेरिकी डलर मा खाता राख्नु हुन्छ स्विजरल्याण्ड मा कुनै कर छैन। यदि कसैले स्विस फ्रान्कमा खाता राख्छ भने, खातावालाले ती नाफाहरूमा स्विस करहरू तिर्दछ।
त्यसो भए यसको मतलब यो हुन सक्छ कि तपाईले आफ्नै देशलाई मात्र कर भुक्तान गर्नु पर्दैन, तर तपाईले बैंकि are्ग गर्ने देशमा पनि। सामान्यतया, तपाईले आफ्नो घरेलू कर बिलबाट विदेशी कर घटाउनुहुन्छ, त्यसैले प्रभावहरू प्राय: तटस्थ हुन्छन्।
एक अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खाता तपाईंको आफ्नै देशको सिमाना बाहिरको राष्ट्रमा एक हो। एक अपतटीय सम्पत्ति सुरक्षा विश्वास संग संयुक्त यो के छ तपाइँको सुरक्षाको एक उत्तम तरिका हो। अफशोर बैंकहरूले कानुनी रूपमा आवश्यक तपाईंको ग्राहक नियमहरू पालना गरेर आफ्नो इजाजतपत्रहरू सुरक्षित गर्दछ। यसको मतलब तपाईंले कानुनी कागजातहरू उपलब्ध गराउनुपर्दछ बैंक अनुरोधहरू।
तपाईंको अफशोर खातामा फन्डहरूको प्रयोग डेबिट कार्ड स्वाइप गर्ने जत्तिकै सरल छ। तपाइँको अन्तर्राष्ट्रिय बैंक खाताबाट पैसा पठाउन र प्राप्त गर्न तार ट्रान्सफर गर्न जत्तिकै सजिलो छ।
के तपाइँ एक अफशोर बैंक खाता खोल्न चाहानुहुन्छ? यदि हो भने, कृपया माथिको फोन नम्बरहरू प्रयोग गर्नुहोस्। तपाई यस पृष्ठमा अधिक जानकारीका लागि फारम भर्न सक्नुहुन्छ, दिनको २aघण्टा।